အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါသည်
... 10:40:00 AM
Nice post. I want to know what make him to change his mind...
2 April 2009 at 10:21 PM
ကျေးဇူးပါ ဗျာ ၊၊ စာလာဖတ်ရုံမက Comment လေးပါ ပေးသွားလို. ၊၊ ကိုဖိုးချိုသာ အသိဆုံး ဖြစ်မှာပါ ၊၊
ပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှာနေရတဲ့ ဘ၀တွေကို တွေးမိတိုင်းဝမ်းနည်းမိတယ်။
ကိုဖိုးချို ပြောသွားတဲ့ စကားလေး ကြားရတာ
စိတ်ထဲ တစ်မျိုးပဲ ...